अफगानिस्तानमा चरम मानवीय संकट : भोक मेटाउन ५ सय डलरमा सानी छोरी बिक्री
गृहपृष्ठ » अन्तर्राष्ट्रिय » अफगानिस्तानमा चरम मानवीय संकट : भोक मेटाउन ५ सय डलरमा सानी छोरी बिक्री
काठमाडौं । गत अगस्टमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै अफगानिस्तानमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ ।
अफगानिस्तानमा खाद्यान्न, औषधिलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएको छ ।
त्यहाँ तत्काल पर्याप्त खाद्यान्न र औषधोपचार नपाउने हो भने करिब १० लाख बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने डब्लूएफपीको चेतावनी छ ।
अफगानिस्तानको यतिसम्म संकट उत्पन्न भएको छ कि अभावले ग्रस्त परिवारले आफ्ना छोराछोरी बिक्री गरिरहेका छन् । बीबीसीको एउटा रिपोर्टका अनुसार भर्खरै एक महिलाले परिवारका अन्य सदस्यलाई बचाउन नवजात शिशु बिक्री गरेकी छिन् ।
उनका श्रीमान् कबाडी संकलनको काम गर्थे, तर त्यसबाट केही आम्दानी नै हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘हामी भोकले मरिरहेका छौं । हामीसँग अहिले न त पिठो छ न त तेल । हामीसँग केही पनि छैन ।’
भोक टार्न यस्तो छ योजना
झण्डै ५ दशक लामो लडाईँ बाट शान्तिको मार्गमा फर्किन खोजेको अफगानिस्तानमा नयाँ संकट देखा परेको छ । अफगानिस्तानमा भोकमरी समस्या बढ्न थालेको हो ।
भोकमरीजस्तो गम्भीर संकटसँग जुध्न तालिबानले नयाँ स्किम जारी गरेको छ । तालिबान सरकारले ‘खानाका लागि काम’ स्किम ल्याएको हो । जानकारी अनुसार अब अफगानिस्तानमा कामको बदलामा पैसा नभई अन्न दिइनेछ ।
केहि अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसरा अब त्यहाँ काम गरेवापत ज्यालाका रूपमा गहुँ दिने गरिएको छ । यसको जानकारी तालिबानका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद आइतबार दक्षिणी काबुलमा भए साक्षात्कारमा दिएका हुन् ।
मुजाहिदका अनुसार अफगानिस्तानका सबै ठूला शहरहरुमा यो योजना लागु हुन्छ । उनका अनुसार राजधानी काबुलमा मात्रै ४० हजार मानिसहरुले रोजगार पाउने छन् । प्रवत्ता मुजाहिदले बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि यो योजना ठूलो हतियार साबित हुने विश्वास लिएका छन् ।
तर त्यस योजनाको लाभ उठाउनका लागि काम गर्नु पर्नेछ । लडाईँका कारण अफगानिस्तान पहिलेदेखि नै गरीबी, सुख्खा, बेरोजगारी, भोकमरी, बिजुली अभावसहित धेरै खालका समस्याहरुसँग लड्दैछ ।
तालिबान सरकारलाई विश्वले मान्यता नदिएपछि आजका दिनमा आर्थिक संकट पनि अफगानिस्तानको गम्भीर समस्या हो । खानका लागि काम योजनाको लाभ पहिलेदेखि काम गरिरहेकाहरुले पाउने छैनन् ।
यसको लाभ ति व्यक्तिहरुले लिन सक्छन्, जो बेरोजगार र भोकमरीजस्तो समस्याबाट ग्रस्त छन् । योजनानुसार काबुलमा ११ हजार ६०० टन गहुँ बाड्ने तयारी छ । जबकि हेरात, जलालाबाद, कान्धार, मजार ए शरीफ र पुल–ए–खुमरीमा ५५ हजार टन गहुँ वितरण गरिनेछ ।
ति मजदुरहरुले काबुलमा पानीको समस्यासँग लड्न एक केनाल बनाउने छन् । तालिबान सरकारका कृषिमन्त्री अब्दुल रहमान रशीद र काबुलका मेयर हमदुल्लाह नोमानी ने गुलाबी रिबन काटेर योजनाको उद्घाटन गरेका हुन् ।
दक्षिण अफ्रिकामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा वृद्धि
इरानी र तालिबान सेनाबीच झडप, अहिले कस्तो छ अवस्था ?
कोरोना खोपको तीन डोज लिएका दुई डाक्टर ओमिक्रोनबाट संक्रमित
म्युनिखको विमानमा बम विष्फोट
एकैदिन दुई देशको संसद भवनमा भयानक आगलागी
ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलिएपछि लकडाउन बारे बाइडेन यस्तो आयो भनाई
इन्जिन फेल भएको विमानमा सवार १३९ यात्रुलाई पाइलटले कसरी बचाए ?
२८ वर्षीया महिला सांसदको अश्लिल भिडियो लिक, जवाफमा के भन्छिन् ?
महिलामाथि संसद्‍मा बढ्यो यौन हिंसा, मन्त्रालय भित्रै हुन्छ करणी
१३० किमी प्रति घण्टाको तीव्र हावाले ठुलो क्षति : ४ जनाको मृत्यु, १९ घाइते
हेलिकोप्टर दुर्घटना, कति सवार र कति मृत्यु विवरण आउन बाँकी
कोरोनाको अर्को रुप ओमिक्रोनबाट आत्तियो जापान सबै विदेशी यात्रुमाथि रोक
भारतमाथी बज्यो खतराको घण्टी, चीनले सीमामा क्षेप्यास्त्र र रकेट तैनाथ गरेपछि भारत आत्तियो